Voaambana basy iretsy voalohany ary namaly bontana rehefa avy nanao tifi-danitra. Nitsoaka ilay lehilahy, saingy voan’ny balan’ireo miaramila teny amin’ny tongony.
Nandritra ny famotorana natao taminy no nilazany fa jiolahy ny rainy, ary lehiben’izy ireo. Tany ho any amin’ny fiandohan’ny volana jona tany no nisehoan’izany tranga izany. Raikitra ary nanomboka teo ny hazalambo nataon’ireto miaramila. Nisy fotoana izy ireo niditra hatrany anatin’ny tsenan’Ambatondrazaka mihitsy nanao fikarohana.
Manana havana ambony
Ny alatsinainy lasa teo no tratra tao amin’ny tsenan’Ambatondrazaka ilay raim-pianakaviana tompon-trano Ra-Gasy, na Rajeranto Gaston, 64 taona. Nisy fotoana nahenoan’ny olona an’io lehilahy io nilaza hoe : « izaho ma (ndlr : izaho moa) tsy fantatrareo ? Anareo izay miaramila kely ireto mba hagnino. Misy ôl (ndlr : olona) ambony anie I’retsy (ndlr : lehiretsy), havanay e ! ».
Vokany lavon’ny bala teo amin’ny sampanan-dalana mihazo ny fokontanin’i Mangalaza, kaominina Feramanga Avaratra Ra-Gasy, omalu maraina tokony tamin’ny 8 ora sy sasany. Izany dia nialohavana karazana fifamaliana izay nisy teo aminy sy ireto miaramila, araka ny filazan’ireo nanatri-maso ny zava-niseho. Fantatra fa mbola misy namany karohina fatratra amin’izao.